Labo qarax ayaa ka dhacay magaalada Beirut – Get up to 50% off when you buy multiple small stickers.
Labo qarax ayaa ka dhacay magaalada Beirut
Ogosto 4, 2020, kayd dhan 2750 metrik ton oo ammonium nitrate si taxadar leh loogu keydiyay dekedda Beirut, Lubnaan ayaa shidday oo kicisay qarax aad u sarreeya kaas oo burburiyay qaybo badan oo ka mid ah magaalada qadiimiga ah.
Labo qarax, oo ah kii labaad oo aad uga weyn kii hore, ayaa ka dhacay magaalada Beyruut fiidnimadii Talaadada, waxaana ku dhintay ugu yaraan 154 qof, in ka badan 5,000 oo qofna waa ay ku dhaawacmeen, waxaana ay geysteen burbur baahsan. In ka badan 1,000 qof ayaa la dhigay isbitaal, 120 ayaa weli ku jira xaalad halis ah Jimcihii, sida uu sheegay wasiirka caafimaadka Lubnaan, Hamad Hassan.
Qarixii labaad waxa uu soo diray bug guduudan oo ka sarreeya dekedda magaalada waxana uu abuuray mawjad naxdin leh oo burburisay muraayadda masaafo dhan. In kasta oo ay jiraan hawlgallo ballaaran oo baadigoob ah, haddana waxaa la rumeysan yahay in tobaneeyo qof lagu la’yahay magaalada caasimadda ah ee Lubnaan, ee ku taal bariga xeebaha badda Mediterranean-ka.
Iyadoo mas’uuliyiintu ay si wadajir ah u soo ururiyeen wixii dhacay, halkan waa fiiri waxaan naqaan iyo waxa aanaan ogeyn.
Maxaa sababay qaraxyada?
Sababta saxda ah ayaan weli la ogeyn, balse dab ayaa baabi’iyay bakhaarka dekedda abbaare 6-dii galabnimo. Waxaa dhacay labo qarax, mid ka yar waxaa xigay ilbiriqsiyo kadib qarax ka weyn oo burburiyay qeybo badan oo magaalada ah.
Tags: akiraall mightanimeapocalypsebakugobakugoubariga dhexebeirutbeyrouthbnhaboku no hero academiaboomCarabCarabiCiraaqcutedekudubaifairouzfarshaxanfirefunnygeesiimaaradahaizukujapanjordankacchankatsukikatsuki bakugoukedarkonosubakuwaitLubnaanluqadmagaaladamangaMasarmeguminmhamidoriyamoroccomúsicmy hero academianostalgiaqaraxqatarredretrosaudi arabiaSayidka dil dilSuuriyatypographyuaevintagexabiibixigasho
June 13, 2022 by admin Somalia - Soomaaliya 0
Next Un par de explosiones golpean la ciudad de Beirut
Previous Par eksplozij je prizadel mesto Bejrut